တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသယာဉ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ်မှ ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ရုပ်ထွက်မြင့်မားသော အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ဓာတ်ပုံအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- CNSA/Handout via Xinhua)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်အား သယ်ဆောင်ထားသော ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ် (lander) သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ် အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က မေ ၁၅ ရက် နံနက်ပိုင်း၌ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ ထျန်းဝန်-၁ အာကာသယာဉ် အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက်နိုင်ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တော်ရှိ ပေကျင်း အာကာသထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတွင် နည်းပညာရှင်များ အောင်ပွဲခံနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ်၊ ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ်နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်ပါဝင်သော ထျန်းဝန်-၁ ယာဉ်အား တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ကျွန်းပြည်နယ်ရှိ ဝန်ချန်းအာကာသယာဉ် လွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါယာဉ်ကို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းပတ်ခြင်း၊ ဆင်းသက်ခြင်းနှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်လှည့်လည်သွားလာခြင်းများကို လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းတွင် ပြီးမြောက်ရန် ပုံစံထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဂြိုဟ်များအား စူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
၎င်းအာကာသယာဉ်သည် အာကာသအတွင်း ၇ လနီးပါး ခရီးနှင်ပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီလက အင်္ဂါဂြိုဟ် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဝင်
The spacecraft entered the Mars orbit in February afterajourney of nearly seven months through space, and spent more than two months surveying potential landing sites. Enditem
1-2-File photo released on March 4, 2021 by the China National Space Administration (CNSA) showsahigh-resolution image of Mars captured by the country’s Tianwen-1 probe. The lander carrying China’s first Mars rover has touched down on the red planet, the CNSA confirmed on Saturday morning. (CNSA/Handout via Xinhua)
3 –4– (210515) — BEIJING, May 15, 2021 (Xinhua) — Technical personnel celebrate after China’s Tianwen-1 probe successfully landed on Mars at the Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, May 15, 2021. The lander carrying China’s first Mars rover has touched down on the red planet, the China National Space Administration (CNSA) confirmed on Saturday morning. (Xinhua/Jin Liwang)